Nezvedu - Qingdao Yingzhicai Packaging Co. Ltd.
Tine makore anopfuura makumi maviri ane ruzivo mu kugadzira mapurasitiki ekupakata mabhegi
Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd, iri muQingdao Guta, Shandong Province, yakavambwa muna 1996, inofukidza 9800 mativi emamirimita, iri kushandisa kugadzira mapurasitiki ekupakata mabhegi, mabhegi eshingi, matatu-mativi chisimbiso, mabhegi ealuminium, mabhegi ealuminium, stereo (yega -supporting) mabhegi, akasarudzika-akaumbwa mabhegi, achibatanidzwa nefirimu kuridza. kudhinda, kunyora, kugadzira mabhegi, nezvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mumaindasitiri senge dairy, chinwiwa, chikafu, condiment, cosmetics, kusuka zvigadzirwa.
Ine chitupa chekudhinda uye kodhi yekudhinda kodhi.
Iyo kambani ine yakakwana uye inonzwika mhando yemhando manejimendi
Yakapfuura IsO9001-2008 uye QS Kudya Kwekuchengetedza Chigadzirwa Certification
"Qulity hupenyu, Zvakanakira zvinobva mukutungamira"
Qingdao Yingzhicai Packaging Co.Ltd inosimbirira pamutemo we "qulity hupenyu, mabhenefiti anobva mukutungamira", nekutendeseka kwayo, simba uye chigadzirwa chigadzirwa chakarumbidzwa zvikuru nevatengi vari muindastiri.
Kune matekinoroji uye Qs tsvimbo ane hupfumi ruzivo, anokwanisa kuona zvemhando yepamusoro zvigadzirwa uye kuenderana nezvinodiwa zvevatengi nekudzora zvinhu, cheki, maitiro, zvigadzirwa zvakapedzwa uye kuendesa.
Iyo kambani yakagadzika inoshanda uye yakakwana sevhisi yebasa system, uye inopa masevhisi akasanganiswa kusanganisira technical technical kubvunza, chigadzirwa modelling, nyanzvi dhizaini uye yekupakira gwaro.
Yese tsvimbo dzekambani dzinoda kushandira pamwe nevatengi kumba nekune dzimwe nyika nehunhu hwedu hwekudziya uye hwechokwadi, hwakawanda hunyanzvi uye hwakanakisa nzira dzebasa.
Edza kugadzira basa riri nani kune vatengi
Tsanangudzo inosarudza kubudirira kana kutadza
Sarudzo dzinoita ramangwana
Export Nyika Uye Matunhu
1.NaVaJohn Magel Germany, Bhizinesi rakareba neQingdao Yingzhicai Package.my timu yakashanyira fekitori yavo ichienderera kuodha yangu, hongu, inyanzvi fekitori.saka yakanaka kutaura navo.Wakaita bhizinesi nguva zhinji parizvino uchifara gara uchigamuchira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nemasevhisi akanaka.
2. NaVaAbe Romana USA, Se mugari wemuAmerica anoita bhizinesi muChina nyaya yekutanga yandaishushikana yaive yekutaurirana sezvo chipingamupinyi ichi chingave chinoshungurudza kubata nechikwata chekutengesa chave chiri kupesana.
3.Ron Matt USA, homwe mabhegi uye michina zvasvika nhasi, Zvese zvinotaridzika zvakanaka uye kuzviisa mukushandira, homwe bhegi rinotaridzika kwazvo, uye Machines zvakare ari mune yakanyanya mamiriro, Koshesa basa rako repurofesa.
4. Na Ms, Julian Paterson Australia, Chaive chakanakisa kushanya kuChina kekutanga, ini ndinoda guta, Qingdao, Yakanaka kwazvo.Mystem yangu kuguta iri kushanyira mutengesi wangu Yingzhicai Package.